नेपाली सेयर मार्केटमा यी कम्पनीको सेयर मूल्य किन हुन्छ सर्वाधिक महँ गो,यस्तो छ भित्रि रह स्य! – Ap Nepal
March 28, 2021 473
सिमित लगानीकर्ताको हातमा महँगो सेयर, मूल्य आफै बढाउँछन् : विज्ञ डा. श्रेष्ठ यी कम्पनीको सेयर सिमित लगानीकर्ताको हातमा मात्र भएकाले उनीहरुले मूल्य आफै बढाउने सेयर बजारका जानकार डा. केशव श्रेष्ठ बताउँछन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुन् । यसको सप्लाइ सिमित छ । यता साल्ट ट्रेडिङको पनि सिमित सप्लाइ छ ।
सातामा नेप्से करिब ३ प्रतिशत बढ्दा कुन उपसमूहको परिसूचक कति बढ्यो? गत साता सामान्य उकालो लागेको नेप्से परिसूचक यस साता करिब ३ प्रतिशत बढेको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन २४७५.०९ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से, यस साता २.९८ प्रतिशत अर्थात ७३.८७ अंक बढेर २५४८.९६ विन्दुमा पुगेको छ।
गत साता सामान्य उकालो लागेको नेप्सेलाई भोल्यूमले साथ दिएको थिएन। बजार बढेपनि पर्याप्त भोल्यूम नभएका कारण लगानीकर्ताहरु केही अन्योलमा थिए। तर, साताको पहिलो कारोबार दिन नै करिब ६ अर्बको कारोबार भएपछि लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढेको थियो। फलस्वरुप यस साता समग्रमा नेप्से करिब ३ प्रतिशत बढ्न पुग्यो।
यस साता सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.३९ प्रतिशत अर्थात ६.१६ अंक बढेर ४५०.३१ विन्दुमा पुगेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स २.८९ प्रतिशत अर्थात ४.९२ अंक बढेर १७४.९९ विन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी, यस साता सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.५२ प्रतिशत अर्थात २.१९ अंक बढेर १४६.४६ विन्दुमा पुगेको छ।
यस साता नेप्सेमा कुल २९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। यो अघिल्लो साताको सोही अवधिको तुलनामा ४३.५४ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बढी हो। गत साता बजारमा २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो।
नेप्सेसँगै यस साता बजार पूँजीकरण पनि बढेको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन ३४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजार पूँजीकरण यस साता ३५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसअर्थमा यस साता लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ती १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ।
यस साता कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये १२ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने एक उपसमूहको मात्र घटेको छ। यस साता होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २६.०६ प्रतिशत बढेको छ। गत साता २८६८.२८ विन्दुमा रहेको यस उपसमूहको परिसूचक यस साता ७४७.३४ अंक बढेर ३६१५.६२ विन्दुमा पुगेको छ। अंकका आधारमा भने यस साता व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक बढेको छ। यस साता सो उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ८९९.१५ अंक बढेको छ।
कारोबारमा आएको अन्य उपसमूहको परिसूचक भने यस साता ०.०५ प्रतिशत अर्थात ०.९० अंक घटेको छ। फ्लोरसिट विश्लेषण गर्दा यस साताको मोस्ट पपुलर बाइङ्ग स्टकको सूचीमा लक्ष्मी इक्विटी फण्ड, युनिलिभर नेपाल, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स लगायतका कम्पनीहरु परेका छन्। साताको मोस्ट पपुलर सेल स्टकमा भने बैंक अफ काठमाडौँ, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, ओरियन्टल होटल लगायतका स्टक परेका छन्।
Prevकल्पना दाहाल र प्रदिप रोक्का दोहोरी च्याम्पि यन जि तेपछि रुदै मिडियामा,दोहोरी च्याम्पियनकै बेलामा थपियो यस्तो पि: डा! (भिडियो सहित)
Nextबिचरा के थाहा यस्तो होला भन्ने ,खाल्डा भएको साँघुरो सडकले लियो एउटै परिवारका ३ जनाको ज्यान, बि चरा खाना खान जादै थिए